7 iibheringi zohlobo
Iibheringi zoomatshini bezolimo
Iibheringi zezixhobo zoomatshini
Iibheringi NSK non-standard
Ukuthwala ivili leemoto
Iibheringi kwamanye amazwe
Iibheringi ezingaqhelekanga ziye ngokuthe ngcembe zaba zezona zinto ziphambili ezisisiseko
Iibheringi ezingekho mgangathweni iibheringi zibalulekile kwaye ziphambili kwicandelo lokuvelisa izixhobo, ezichonga ngokuthe ngqo ukusebenza, umgangatho kunye nokuthembeka kwezixhobo eziphambili kunye neemveliso zokubamba, kwaye zaziwa njengezinto "zentliziyo" zokwenza izixhobo. N ...
Ukujonga njani ukubonakala kweebheringi ezingaqhelekanga
Zonke iintlobo zamanxeba oomatshini, njengokukrala, imikrwelo, ukonzakala koxinzelelo, ukugruzuka, njl., Kuya kubangela ukufakelwa kokuthwala okungalunganga, kubangele imithwalo ye-eccentric kunye noxinzelelo loxinzelelo, kwaye kubangele ukwehla kokujikeleza ngokuchanekileyo kunye nobomi benkonzo. Umhlwa, ulusu olumnyama, kunye nokungena, ezi zimbini zokugqibela d ...
Ukungaqondani okuthathu kwindibano yeebheringi ezingaqhelekanga
Xa ufaka kwaye uhlanganisa iibheringi ezingekho semgangathweni, sineemfuno ezingqongqo kakhulu kumgangatho wofakelo kunye nendawo. Ukuba awunikeli ngqalelo kwimpembelelo yendawo yendibano, izinto zangaphandle ezinje ngokufakwa kwentsimbi kunye neebhurethi ziya kudityaniswa kwiibheringi ezingekho semgangathweni, wh ...
Ukugcinwa kunye ukuthambisa ajikeleze iibheringi non-standard
Ngokwokusetyenziswa kwamalungu kunye neemeko zokusetyenziswa kunye neemeko zokusingqongileyo, khetha ubungakanani, ukuchaneka, kunye neebheringi ezingaqhelekanga eziqhelekileyo sisiseko sokuqinisekisa ubomi kunye nokuthembeka. Indawo yosetyenziso: Iibheringi ezingaqhelekanga zilungele imithwalo ye-radial kunye ne-axial ...
Iindlela ezithile zokulungisa iibheringi ezingaqhelekanga
Iibheringi ezingaqhelekanga xa ukuthwala kuzisa iingxaki; umbono wokuqala kuluhlu kufuneka ube kukujonga nokulungisa; ukungatshintshi. Iindidi ngokubanzi zokulungiswa kokuthwala zezi zilandelayo: yeka ukubukela nokulungisa. 2. Ukulungiswa kwexesha: Ukuze kuqinisekiswe ...
Iingxaki ekusebenziseni iibheringi ezingaqhelekanga
Amanyathelo okhuseleko ekusetyenzisweni kweebheringi ezingaqhelekanga: 1. Emva konyaka omnye usebenze ngesiqhelo, ioyile yokuluka eyi-2 # kunye ne-coarse kunye ne-filter entle kufuneka itshintshwe. 2. Xa isikhululo sempompo sisetyenziswa ngokwesiqhelo ukwenza ioyile, kufuneka icocwe ngemaleko emi-3 yelaphu lesilika. 3. Ukulayisha nokukothula ...
Uthintela njani ukuthwala umhlwa?
Ukucoca umphezulu: Indlela efanelekileyo kufuneka ikhethwe ngokubhekisele kubume bomphezulu wento enxamnye nomhlwa kunye neemeko zelo xesha. Ngokuqhelekileyo kusetyenziswa indlela yokucoca i-solvent, indlela yokucoca unyango lwamachiza kunye nendlela yokucoca ngomatshini. Emva kokuba umphezulu womile kwaye ucocekile ...
Zeziphi iingxaki ekufuneka zinikwe ingqalelo ekusetyenzisweni kweebheringi ezingaqhelekanga
Iibheringi ezingaqhelekanga kufuneka zithathelwe indawo yioyile yokuluka eyi-2 # kunye ne-coarse kunye ne-filter entle emva konyaka omnye usetyenziswa ngesiqhelo. Xa isikhululo sempompo sisetyenziswa ngesiqhelo ukwenza ioyile, kufuneka icocwe ngemaleko emi-3 yelaphu lesilika. Ukulayisha kunye nokothula kwe-shaft pulley kunye nevili lokusila m ...
Imikhwa yolondolozo engaqhelekanga ibaluleke kakhulu
Iibheringi ezingaqhelekanga, iibheringi ezikhethekileyo ezingafakwanga mgangatho ngurhulumente, zinokusetyenziswa kwizihlandlo ezininzi, kwaye ziya kusetyenziswa kwiindawo ezinendawo ezingqwabalala ubukhulu becala. Banethuba lenkonzo ende kunye nexesha elide lokugcinwa. Ke ngoko, ukwenza njani ukugcinwa ...
Kufuneka ndenze ntoni ukuba iqondo lobushushu leebheringi ezingaqhelekanga liphezulu kakhulu?
Ubomi benkonzo yeebheringi ezingekho semgangathweni zihambelana ngokusondeleyo nokwenziwa, ukuhlangana kunye nokusetyenziswa. Kufuneka yenziwe kuyo yonke ikhonkco ukwenza iibheringi ezingaqhelekanga zikwimeko efanelekileyo yokusebenza, ngokwenjenje yandisa ubomi benkonzo yeebheringi ezingaqhelekanga. 1.Ujongana njani nefuthe lobushushu obuphezulu ...
Ungahlulahlula njani umgangatho we-non-standard bearing shaft gear hobbing
Uhlalutyo lokuchaneka koomatshini ngokuchasene. Ukuchaneka kwe-shaft gear ikakhulu kunxulumene nokuchaneka kokuhamba, ukuchaneka kozinzo, kunye nokuchaneka kokuchukumisa. I-hobting top machining isebenzisa ulawulo lobude bomgca oqhelekileyo kunye ne-ring gear gear ukuqinisekisa ukuchaneka kokuhamba; ulawulo ...
Ukutolikwa kweendleko ezifihliweyo zeenkampani ezincinci neziphakathi eziphakathi
Ukhuphiswano, ngakumbi amashishini amancinci naphakathi aphakathi kunye neenkampani eziphuhlisayo, bahlala behlangabezana neengxaki zophuhliso ngexesha elithile, bahlala beziva ukuba iindleko zokusebenza bezinyuka, kodwa kunzima ukufumana "indawo" ...
Idilesi:I-Tang tang yuan yuan idolophu, i-liaocheng kwisixeko sase-shandong linqing, indlela enkulu no. 168